Sacuudiga oo waji kale u Samaysay Dagaalka ay kula jirto Dalka yar ee Qadar. – Xeernews24
Sacuudiga oo waji kale u Samaysay Dagaalka ay kula jirto Dalka yar ee Qadar.
11. Juni 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxda dowladda Boqortooyadda Sadcuudiga ayaa dadka kasoo jeedo dalka Qatar ka mamnuucay inay galaan beydka Alle ee Xaramka taasoo qeyb ka ah dagaalka ay kula jiraan dowladaha Khaliijka wadanka Qatar sida uu qoray wargeyska kasoo baxo Magaalada Doha ee lagu magacaabo Al Sharq newspaper.
Ururka Xuquuqul Insaanka dalka Qatar ee loo yaqaan Qatar’s National Human Rights Commission (NHRC) ayaa ka dhawaajiyey inay soo gaadhay cabashooyin kala duwan oo ka imaanayo dadka kasoo jeedo Qatar kuwaas oo sheegay inay dowladda Boqortooyada Sacuudigu u diiday inay galaan Masjidka Haramka ee ku yaal Makka iyo Beydka Alle.
Dowladda Sacuudiga ayaa waji kale oo fool xumo ah u rogtay dagaalkii ay dowladaha Khaliijka kula jireen Dalka Qatar oo ay ku tilmaameen inay garab siiso kooxaha argagixisada.
DowladdaBoqortooyadu Sacuudigu weli si rasmi ah uguma hadlin go’aankaan cusub oo ay qaadatay, waxaana la sugayaa sida uu arrintaan uga hadlo u adeegaha Beydka Alle ee dalka Sacuudiga.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/madina.png 155 326 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-06-11 12:34:262017-06-11 12:34:26Sacuudiga oo waji kale u Samaysay Dagaalka ay kula jirto Dalka yar ee Qadar.
Qatar oo si maadeysi iyo Quudhsi ah uga jawaabtay Go’aankii S/Land &... Daawo:Dawlada Jabuuti oo 14 Juun u dabaaldegaysa Guushii ugu weynayd ee ay dunida...